Semalt: WordPress 10 Zvizivikanwe Zvikwangwani Mu 2017
Shoko rePad WordPress rinoita kuti kuwedzerwa kushanda kwewebsite. Inowedzerawo zvinhu zvitsva kune e-commerce nzvimbo uye mablog uye zvakanyorwa mumitauro yekufambisa PHP. MaPauglas anoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tiwedzere zvinhu zvitsva, mavara, uye zvigadziro kune mawebsite edu.
Kusarudza yakanakisisa yePlogin WordPress kunogona kunge yakanyanyisa, asi pano Frank Abagnale, nyanzvi yepamusoro Semalt , akakurukura 10 dzinonyanya kuzivikanwa se WordPress plugins gore rino.
Icho chimwe chezvinyanya kuzivikanwa uye zvakashandiswa zvikuru WordPress plugins ne Yoast - nankang 16x6.5x8. Iyi SEO plugin inobatsira kuwedzera mazita uye zvitsanangudzo pamabhagi ako ebhulogi uye inokubvumira kuwedzera mafirimu akazarura uye data meta. Unogonawo kuongorora mapeji ako, unogona kuparidzira xml sitemaps uye kuita zvakawanda nezvinovhara yakazara.
The BackupBuddy is easy to use and friendly WordPress plugin. Izvi zvinokuita kuti uchengete mafaira ako uye unobatsira kuronga zvinyorwa zvako. Mukuwedzera, BackupBuddy inobatsira kuchengetedza webhu yako kubva kune mbavha uye mavairasi. Iyo inochengetedza mafaira ako akachengetwa mugore uye zvimwe zviyeuchidzo.
Kufamba kwewebsite yako kunokosha zvikuru pakuvandudzwa kutsvaga injini kutarisa. Uine W3 Total Cache, unogona kuwedzera kukurumidza kwewebsite yako uye unogona kuderedza nguva yekurayira, iyo inogona kuderedza kuputika kwako.
WPForms ndeimwe yevashandisi-vakanaka uye mapurisa akanaka kwazvo..Inobatsira kudonha nekudonha mafomu epaIndaneti uye inokubvumira nyore nyore kuumba fomu yekubhadhara email, fomu yekubhadhara, fomu yekuraira, nemamwe marudzi emafomu eInternet. Shanduro yakasununguka yakanaka kuti uende nayo, asi unogona zvakare kuedza shanduro yakabhadharwa.
Kana iwe uri email kana mutengi mutengesi, unogona kuedza OptinMonster. Izwi guru uye rinoshamisa re WordPress plugin uye rakanyanya kushandiswa nevhizimisi. Izvi zvinokubatsira kuti uwedzere nhamba yevanyoresa maimeri uye unoshandura vatendi vako kuti vave vanofara vanotenga.
neError Flow, unogona kugadzira zvinyorwa zvako zvakanyorwa kare panguva imwe. Iri Plugin WordPress rinokubatsira kutarisira mharidzo yemharidzo, zvinyorwa, uye zvinyorwa zvebhurugi nguva dzose. Iwe unokwanisa kuisa zvirongwa zvayo maererano nezvose zvaunoda uye uronga zvinyorwa zvekugadzira sarudzo yemigumisiro yakanakisisa.
Zvakachengeteka kutaura kuti Soliloquy ndiyo yakanakisisa ye WordPress plugin yekubvuma mawebsite. Izvi zvinoita kuti uwedzere kushanda kwewebsite yako pasina kukuvadza SEO yayo. Plugin iri nyore kuisa uye inotakurwa nemasikirwo akasiyana-siyana uye blazers kusarudza kubva.
Sucuri is plugin yakazara inobatsira kuti uone kuchengeteka nekuchengeteka kwewebsite yako. Kana iwe uchida kudzivirira vanokanganisa kana mavairasi pakurwisa masayiti ako, unofanirwa kuwana Suuri sezvo inopa mazano akasiyana-nguva, tsanho yekuchengetedza, uye malware ekubvisa mabasa.
9. Mafashamo Evanhu Vakasununguka
Mafashamo eZvesangano reMafashamo ndeimwe yepamusoro yehupenyu hwemagetsi. Iyo yakakwana yeWebsitePress yako uye ine zvisingaverengeki zvehupfumi zvekushandisa. Iyi plugin inokubvumira kuti uwedzere ruzivo rwemagariro ehupfumi hwemagariro ekubatanidza vashandi vakawanda.
Izvi zvisingatauri WordPress plugin ine zvakawanda zvekusarudza uye inochengetedza tsvaga yako yepaiti. Icho chikamu chechitatu chekutaurira plugin iyo isingabatsire sevha yako uye inoita mabasa akasiyana-siyana.